guriga OCEANFRONT Big la views la yaab leh !!
Homeguriga OCEANFRONT Big la views la yaab leh !!
Size Luudh140 m²
Iib: hantida baxday inka badan Exclusive magaalada xeebta ah ee xasilloon El Poris, oo ku yaalla koonfurta ee Tenerife, Canary Islands, Spain!
toponym The "Porís" in lahjad Canarian u taagan tahay "dekedda yar dabiici ah". ka dekedda Marka laga reebo this magaalada xeebta ah oo raaxo leh waxay bixisaa laba xeebaha dabiiciga ah - mid ka mid ah la jaalaha ah iyo kuwa kale oo ciid madow, meelaha kala duwan ee dabaasha iyo dhamaan kaabayaasha magaalada ay ka mid yihiin dukaamada, bangi, farmashiye, baararka iyo makhaayadaha. Magaalada waxay leedahay xiriir aad u wanaagsan la TF-1 jid la Airport South, Santa Cruz iyo dalxiiska weyn ee Adeje - oo dhan gudahood drive 20 daqiiqo.
guriga waxa uu ku yaalaa magaalada jir El Porís si toos ah hore ee badda iyadoo si toos ah loo heli lahaa biyo ku. Tani waa Xaafadaha degan oo la deggan yahay oo la wadada cusub ee laamiga si toos ah u keenaysaa in garaash gaarka ah.
guriga waxaa loo qaybiyey gudahood 3 heer:
dabaqa dhulka: Terrace fashana addooomadeyda waxaa la views badda dusha, garaashka qufulka-up, qolka fadhiga, qolka jiifka, musqusha, jikada madax banaan, u furan-hawada deyrka gudaha waasac raaxo iyo laba qol godkii !!
dabaqa 1aad: qolka fadhiga kale, laba qol jiif, hal musqusha, dharka iyo helitaanka saqafka. qolka fadhiga iyo jiifka sayidkii leeyihiin daaqado dusha la yaab leh view badda !!
dabaqa 2aad: Terrace saqafka la 360º badda iyo buurta views iyo goob yar oo dalka loo isticmaali karo sida beer ama beero ku beeri miraha ama khudaar aad.
Guriga waa in xaaladiisu wanaagsan tahay oo uu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo-in! Waxa kaliya ee in milkiilaha cusub ee uu leeyahay inuu sameeyo waa inuu ku riday jikada cusub.
Waxaa jira laba dhibco weyn isticmaalo oo ku yaalla El Poris - oo labadoodaba waxaa ka gudahood labo daqiiqo ka guriga ku dul socda!
Fadlan nala soo xiriir si loogu diyaargaroobo booqashadaada!
Floor Qorshayaasha & goynta
dabaqa Ground 3 1 140 € view
dabaqa kowaad 2 1 140 € view
guri xeebta waasac ee el Poris !!